Ajjeechaa Gammachiis Moosisaan shakkamuun misirroo dabalatee namoonni jaha to'ataman - Wanofi.com
Leave a Comment / Oduu Haaraa/News
Dargaggoo ganna 28 fi ogeessi fayyaa hospitaala riferaalaa yunvarsiitii Wallaggaa, Gammachiis Moosisaa, Adoolessa 24 bara 2013 fuudhee guyyaa tokko booda manaa bahuun achi buuteen isaa dhibame.
Maatiin erga barbaadanii dhabaniin boodarra poolisiif gabaasa gochuun barbaachi cimee itti fufe.
Barbaacha maatii fi hiriyyoonni isaa qaama nageenyaa waliin godhaniin reeffi isaa magaala Naqamtee irraa fageenya xiqqaa irratti kan argamu haroo Sorgaa keessa Kibxata gaafa Adoolessa 27 bara 2013 argamuu maatiin BBCtti himan.
Itti Gaafatamaan Bulchiinsaa fi nageenya Magaalaa Naqamtee Obbo Misgaanuu Waqgaarii, Ajjeechaa isaa waliin waan wal qabatu waan beeknu hin jiru jedhan.
”Jaakkeettiin isaa qarqaruma bishaan reeffisaa keessaa argametti mukarratti fannifamee argame. Kiisii jaakkeettiisaa keessaa ammoo qarshii 5,700 ol argameera. Qubeelaa warqee fi sa’aatiin harkaa isa irratti argameera,” jechuun Obbo Misgaanuun waan poolisii fi maatii irraa odeeffatan BBC’tti himan.
Reeffi dargaggoo Gammachis gaafa bahu karaa alaa qaama isaarra miidhaan qaqqabuu mallattoommul’isu hin jiru ture kan jedhan Obbo Misgaanuun, funyaan isaa irra dhiigni qofa akka jiru argame jedhan.
Ajjeechaa isaa waliin waan wal qabate odeeffannoo homaa akka hin arganneefi gadda guddaan itti dhagahamuu kan himan Obbo Misgaanuun, poolisiin dhiira afurii fi dubartoota lama shakkiin to’annoo jala oolcheera jedhan.
”Tokko haadhumti manaa inni fuudhe waan tokko tokko beekti, eeruu nuu kennuu dandeessi jechuun poolisiin shakkee to’annoo jala jirti. Kan biraan mana suuraa inni viidiyoo itti hojjechiisuu deemes taateen kun achitti raawwateeraa laata jechuun poolisiin isaaniinis to’atee qorataa jira.”
Cidhaa isaa bulee gaafa Adoolessa 25, 2013 deebiif mana maatii intalaa deemuuf jecha haalota mijeeffachuuf manaa bahuu maatii irraa dhageenye jedhan Obbo Misgaanuun,
Gatii konkolaataa cidhaaf kireeffatee ture kaffaluu fi viidiyoo cidha isaanii maatii intalaatti agarsiisuuf jecha hojjechiifachuf manaa bahuu isaa maatiin poolisiif gabaasa godhe jedhan.
Maatiin maal himu?
Reeffi ogeessa fayyaa ganna 28 Gammachiis, Kibxata magaala Naqamtee keessatti qarqara laga Sorgaa jedhamutti argamuu maatiin dhagahe.
Reeffi dargaggoo kanaa erga bishaanicha keessaa baafamee qorannoof gara hospitaala Phaawuloositti ergamee ture. Bu’aa qorannoo maatii irraa argachuu baannus reeffi isaa gara bakka dhaloota isaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti deebi’uun sirni awwaalchaa akka gaggeeffamu kaleessa gaggeeffame.
Gammachiis Sanbata xiqqaa darbe cidha raawwatee bulee, Dilbata ammoo sagantaa deebii mana maatii misirittii dhaquuf qophaa’aa turee jedha durbiin isaa Caalaa Inkoosaa BBC’tti yoo himu.
Sababni du’a dargaggoo kana maal akka ta’e hin beekamne. Reeffi isaa hospitaala Phaawuloositti qorannoof ergameera.
Caaliin sagantaan cidhaa Gammachiis karaa mana amantaa irratti kadhatameefi irratti mariyatanii gaggeefamaa turee jedhee, cidhi isaas kallattii hundumaaniyyuu gadda fi mufii tokko malee” raawwatamee jedha.
”Guyyaa cidhaa bulees jecha afaanii miti miirri fuula isaallee gammachuu malee gadda hin qabu ture.”
”Guyyaa Dilbataa takkaa manaa bahuuf jennaan hiriyyaan isaa deebise. Lammaffaarrattimmoo miinjoliin millaashii deemuuf gara sa’aa jahaatti waamamaniiru. Miinjeen inni tokko bajaajaajiin dhufee irraa bu’e. Baajaajidhuma san yaabbate Gammeen” jechuun haala itti manaa bahe yaadata.
Yeroo deemus bakka deemu osoo hin himiin baajaajii saniin akkuma sokketti osoo hin deebi’iin hafuu dubbata Caalaan. Bilbila moobaayilaa isaas manumatti dhiisee bahuu hima.
Maatiifi hiriyyoonni millaashii deemuuf osoo qophaa’aa jiranii pijaamaadhumaan baajaajii tasa miinjee isaa fuutee dhufteen sokkuus hima.
Obbolaa, maatiifi Poolisiin baajaajiin deemuu malee bakka inni deeme waan hin beekamneef hoteelota fi laga keessa deemanii barbaadanii dhabaniis jedha.
Reeffi dargaggoo kanaa erga manaa bahee halkan lama booda Kibxata naannoo sa’aa 7’tti qarqara laga Sorgaatti argamee jedha.
”Ijoolleen qarqara laga Sorgaatti reeffa araganii namatti bilbilanii himanii dhaqnee reeffasaa arganne.”
Ta’ii kanatti hedduu rifachuufi gammachuun guyyaa tokko booda gaddatti jijjiiramuun isaan dhukkubsuu Caalaan himeera.
Namootni dargaggoo kana dhiyeenyatti beekaniifi waliin hojjetan amala gaarii inni qabu yaadachuun du’a cidhasaa bulee isa mudatetti gadduu miidiyaa hawaasaa gubbaatti ibsaniiru.
Gammachiis guyyaa cidhasaa bulee Dilbata fuula feesbuukii isaa gubbaatti fuudhuu isaa ‘just married’ jechuun suurota huccuu aadaafi ammaayyaan haadha warraa isaa waliin ka’an maxxansee ture.
1 Comment / Oduu Haaraa/News
Bitcoin karaa salphaan akkamitti argachuu dandeenya?
Copyright © 2021 Wanofi.com | Powered by wanofi.com